Xidigaha Bollywoodka Ee Saaxibada Dhabta Ahaa Iyo Marka Ay Dhacday Inee Is Colaadiyan Oo Ay Is Dagaalan (+Sawiro) – Filimside.net
Xidigaha Bollywoodka Ee Saaxibada Dhabta Ahaa Iyo Marka Ay Dhacday Inee Is Colaadiyan Oo Ay Is Dagaalan (+Sawiro)
Hadaba waxaan idiin heynaa Qaar Kamid Ah Xidigaha Bollywoodka Ee Nolosha Dhabta Saaxibo Ku Aha Misane Xurguf Dhexmartay:
Kajol Iyo Karan Johar:
Xidigahan kudhowaad 30 sano ayee saaxib dhab ah yihiin waxayna isla sameyeen aflaam taarikhi ah sida KKHT, K3G iyo My Name Is Khan, waxaa jirtay mar ay isku dhaceen waxana isku dhacaas sabab u ahaa iskudhaca Box-officeka kudhexmaray filmada kala ah Shivaay oo Ajay Devgan Director iyo atooreba ka ahaa iyo Ae Dil Hai Mushkil oo uu Karan Johar Director ka ahaa.
Kooxaha labada film waqtigii la daawan lahaa ee Diwali-ga sanadkii 2016 inuu midba midka kale bedeshto wuu diiday sida awged Kajol seygeeda ayee la safatay waxii markaas kadambeyay Karan iyo Kajol iskuma fiicnen mudo ayeena kala aamusnaayen balse marki dambe wey heshiyeen hadana waa saaxibo sidi awal isku ah.
Aishwarya Rai Bachchan Iyo Rani Mukerji:
Xidigahan khilaafkoda waxuu ka bilawday filmka Chalte Chalte kadib markii filmkaan Aish laga saaray maadama Salman rabshado ka kiciya goobaha filmkaan lagu duubayey sida awged Rani ayaa lagu bedelay Aish, waxii markaas kadambeyay Aish wey ka fogaatay Rani maadama filmki ay rabtay ay ka qaaday.
Aish iyo Rani saaxibo dhab ah ayee ahaan jireen, markale Rani waxay isku dayday inee Abhishek Bachchan gacanta ay kudhigto xiligaasna Aishwarya Rai ayaa Abhishek is gaad gaad ku heysay sidaa awged saaxiibadii dhamaadkii 90kii saaxibada ahaa wey kala fogaaden labadaas arin darteed maadama AISH goaan ku gaartay in Rani ay saaxibtinimada u jarto maadama labo khalad ay ka gashay.
Kareena Kapoor Khan iyo Priyanka Chopra:
Kareena Kapoor gabdhaha ay Bollywoodka iskala shaqeyaan cidna saaxiib kama aysan dhigan jirin marka Amrita Rao laga reebo oo ladhihi jiray saaxibo ayee ahaayen.
Balse Bebo si kadis ah ayee kula saaxiibtay Priyanka hadane si kadis ah ayee kukala fogaaden waxaana arinkoda lagu qayaasay in ay isku dagaalen ama ay saaxibtinimadoda u goyeen laba arimood.
Mida kowaad Shahid Kapoor dartiisa maadama Priyanka ay Shahid ay aad usoo jiidatay xiligii uu Kareena xiriirka la lahaa mida labaadna dhanka shaqada ay isku colaadiyeen waayo labadaba awood dheeraad ah ayee lasoo baxeen.
Shah Rukh Khan Iyo Salman Khan:
Saaxibtinimadooda waxay soo bilaawatay bilawgii 90kii qaasatan markii ay wada sameyeen Blockbuster-ki Karan Arjun waxayna wada ahayen kuwa had iyo jeer saaxibo ah.
Salman Khan waxuu muuqaal marti ah ku yeeshtay Filmka weyn ee Kuch Kuch Hota Hai wana la ogaa jaceylka ka dhaxeyay labadaan 90kii iyo heerksa saaxiibtinimadood gaarsiisned waxaa sido kale dhacday in Salman markiisa saaxiibkisa Shah Rukh Ku marti qaado filmkiisa Har Dil Jo Pyar Karega.
Balse labadan colaadoda waxay bilaawatay markii Salman rabshad ka abuuray xili duubista filmka Chalte Chalte lagu guda jiray midaas waxay ka careysiisay Bollywood king Khan SRK waxuuna goaan ku gaaray in gabi ahaanba Aish uu kasaaro mashruucan maadama Salman Aish darteeda buuqa u kiciyay SRK waxuu booski Aishwarya ku bedelay Rani.
Dagaalka xooga wuu soo yara qaboobay kadim marki Salman uu muuqaal marti ah ku yeeshtay filmka Om Shanti Om sido kale waxaa la islaha labadan wey heshiyeen balse wax walbo SRK ayaa bedelay kadib markii Salman saaxiibkiis uu ka codsaday inuu muuqaal marti ah ku yeeshto filmkiisa Main Aur Mrs Khanna.
Balse SRK dalabkaas wuu ku gacan seeray oo wuu diiday halkaas ayuu dagaalkoda kasii balaartay, waxaa dhacday inee ku kulmaan xaflada dhalasho ee Katrina Kaif halkaas ayee aflagaado xun isugu geysteen xidigahan xili dadka oodhan ay wada maqlayaan xitaa Katrina ka xumaatay falka ay sameyeen xidigahan.
Ugu dambeyn wax walbo wey xaliyeen maadama meel bulsho ah ay xidigahan xabadka isku galiyeen soona afjareen khilaafki ka dhaxeyay, haatan waxaad arkeysaa midba midka kale sida uu u qadariyo, hadiyado la isasiinayo aflaam ay isku casuuman iyo amaan midba midka kale xili walba amaano.
Wuu Socdaa Maqaalka Lasoco Qeybta Xigta Iyo 7 Xidig Ee Saaxiibada Dhabtaa Ahaa Iyo Xili Ay Xurguf Dhexmartay…….